ဘာလို့ MacBook တွေက Windows ထက် ဈေးကြီးပြီး ပိုကောင်းနေရတာလဲ?
11 Sep 2018 . 12:27 PM
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို အရည်သွေးကောင်း၊ ဘာအပြစ်မှ ပြောစရာမရှိတဲ့ အမျိုးစားကို ညွန်ပြပါဆိုရင် Apple MacBook တွေလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ Windows ကွန်ပျူတာ ဘယ်လောက်ပဲ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းနေပါစေ၊ Apple ကို ယှဉ်နိုင်နေပြီ ပြောပါစေ၊ ဘာလို့ MacBook ကိုမှ ဈေးကြီးပေးဝယ်နေပြီး Apple စံချိန် ဘာလို့ Windows မချိုးနိုင်သေးလဲဆိုတာ တင်ပြသွားပါ့မယ်။
Mac ဝယ်ရ ပိုလွယ်တယ်
အရင်ကတည်းက MacBook မော်ဒယ်ကို Air နဲ့ Pro ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပဲထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ ရွေးချယ်စရာ ထွေထွေထူးထူး မရှိဘူး။ သုံးချင်တဲ့အနေထားအလိုက် Air နဲ့ Pro ဆိုပြီး ဝယ်နိုင်သလို အွန်လိုင်းစတိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာ အရောင်းဆိုင်မှာဖြစ်ဖြစ် မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ Windows Laptop တွေထက်စာရင် စဉ်းစားရ ခေါင်းမခြောက်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် New MacBook ဆိုပြီး Apple ထပ်မိတ်ဆက်ထားသေးလို့ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံးအတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပိုစမတ်ကျကျ သုံးချင်သေးတယ်ဆိုရင် Air အစား New MacBook ကို ရွေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Apple MacBook Pro Options
Mac တွေက ပြင်ရပိုလွယ်တယ်
ဘယ်လိုကွန်ပျူတာပဲ ဝယ်ထားဝယ်ထား နောက်ဆုံးပျက်သွားခဲ့ရင် နီးစပ်ရာ Service Center ဆီ အမြန်ဆုံးသွားပြရစမြဲပါ။ ဒီနေရာမှာ Service ဆိုင်က ဘယ် Brand ကိုင်ထားတာမလို့၊ ဒီမှာ တခြားလက်တော့ပြင်ရင်တော့ ပိုက်ဆံပိုကုန်မယ် စသဖြင့် Windows ကွန်ပျူတာပြင်တဲ့အခါ အခုလို ပြဿနာတွေ မလွှဲမသွေကြုံရတာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း နာမည်ရထားတဲ့ Service ဆိုင်တဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ဝယ်ထားတဲ့ Brand အလိုက် ဆိုင်ရွေးပြင်ရတာ အတော် ကသိကအောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Mac ပျက်သွားလို့ Sevice ပြရပြီဆိုရင်တော့ ပြောရဆိုရ ပိုလွယ်ကူသလို အတွင်း အစိတ်ပိုင်းတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ အစားထိုး ပြင်ပေးလို့ရတာကြောင့် ဝယ်ထားပြီးရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။
Windows ထက်သုံးရ ပိုရိုးရှင်းတယ်
macOS ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါ၊ ပါလာတဲ့ Dock System လေးက သုံးနေကြ Apps တွေ ထည့်ထားနိုင်သလို အလွယ်တကူ ဖွင့်လို့ရတဲ့ ရိုးရှင်းမှုက Windows ကွန်ပျူတာမှာ ပါလာလေ့မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးထွက် Windows 10 မှာတောင် ပိုရိုးရှင်းတဲ့ User Interface (UI) နဲ့ Experience ပါလာတယ်ဆိုမယ့် အရင်က Apple OS X ကို မမှီသေးပါဘူး။
Apple Ecosystem က Product အားလုံး တစ်မျိုးထဲ ဖြစ်စေတယ်
Apple Ecosystem ကိုတော့ ဘယ်သူမှ ယှဉ်မရသေးဘူး ထင်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး Samsung Products နဲ့ပဲ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Galaxy ဖုန်းတွေ၊ လက်တော့တွေနဲ့ Smart Watch တွေက အသွင်ပြင်ချင်းလည်းမတူ၊ သုံးထားတဲ့ OS ကလည်း တခြားစီဖြစ်နေတာက Product အားလုံး တစ်စုတစည်းထဲ လို့မြင်နေရမယ့် Apple Ecosystem ကို ယှဉ်မရတာပါ။ ဒါကြောင့်မလို့ MacBook ဝယ်ထားလိုက်ရင် ပထမဆုံးအချက် ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်သလို iPhone ၊ AirPod ၊ iPad နဲ့ Apple Watch တွေပါလာခဲ့ရင် Perfect ဖြစ်သွားပါပြီ။
Built-in Software တွေက Windows မှာထက် ပိုသာတယ်
Windows OS မှာ ပါလာတဲ့ Built-in Apps တွေက သုံးလို့ အစဉ်ပြေတယ်ဆိုမယ့် ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ Software တွေလောက် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဘူး။ Microsoft ကလည်း ဒီအချက်ကို ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုမယ့် Mac ထည့်ပေးထားတဲ့ iMovie ၊ Garage Band နဲ့ Image Capture လို Built-in Music နဲ့ Video Editing Software တွေကို မမီသေးတာ အမှန်ပါ။
Pre-installed macOS apps
Windows မှာလို Bloatware Apps တွေ မပါလာဘူး
Bloatware Apps ဆိုတာ တခြား Developer Support ပေးထားတဲ့ Free Apps လို့ပြောချင်တာပါ။ Windows တင်လိုက်လို့ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်၊ Free ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Bloatware တွေ အများသောအားဖြင့် Windows PC မှာ အနည်းနဲ့ အများ ပါလာတတ်ပါတယ်။ Mac မှာတော့ ဘယ်လိုပဲ Fresh Windows တင်တင်၊ အသစ်ပဲ ဝယ်လာဝယ်လာ ဘာ Free App မှ ပါမလာသလို တကယ် လိုအပ်လာခဲ့ရင်လည်း Apple Store ထဲမှာ သွားရှာလို့ရပါတယ်။
Bloatware Apps on Windows
OS သပ်သပ် ဝယ်သုံးစရာ မလိုဘူး
Windows ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mac ပဲဖြစ်ဖြစ် Update ချပေးဖို့ အရေးကြီးတာဆိုတော့ Apple ထုတ်သမျှ OS Update တွေ အမြဲ Free ရနိုင်ပါတယ်။ Windows လည်း Free မပေးဘူးလားဆိုတော့ ပေးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် First Time ကိုတော့ သုံးချင်တဲ့ Windows Edition အလိုက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးဝယ်ရမှာပါ။ Mac မှာတော့ OS ကို ပိုက်ဆံပေးဝယ်နေစရာမလိုပါဘူး။
အကောင်းဆုံး ရုပ်ထွက် MacBook မှာပဲ ရနိုင်တယ်
အကောင်းဆုံး ရုပ်ထွက်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ Windows လက်တော့တွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Mac မှာသုံးနေတဲ့ Retina Display ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် Red ၊ Green ၊ Blue ဆိုတဲ့ RGB Pixel Grid တစုထဲက တစ်ရောင်ချင်းစီ အကျဉ်း၊ အချဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Retina နည်းပညာကို လိုက်မမီသေးလို့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း MacBook တွေ အရောင်ထွက်တိကျလွန်းသလို Windows ကွန်ပျူတာ ဘယ်လောက်ပဲ Colour Accuracy မှန်တယ်ပြောပြော၊ Strong ဖြစ်တယ်ပြောပြော Retina Display ကို ယှဉ်မရသေးပါဘူး။
Retina Display on MacBook Pro
အကောင်းဆုံး Trackpad ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်
Mac Trackpad က သုံးရအစဉ်ပြေတယ်၊3Fingers ၊4Fingers စသဖြင့် Multi-gesture ကောင်းကောင်း Support လုပ်ထားတယ်၊ Sensitivity လည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီအချက်တွေ Windows Laptop တချို့မှာ တွေ့နိုင်တယ်ဆိုမယ့် Mac လောက် မကောင်းသေးပါဘူး။ တစ်ခါတရံ သုံးရတာ အစဉ်မပြေတာမျိုး၊ မတိကျတာမျိုး Windows Trackpad မှာ ဖြစ်တတ်သေးတာမလို့ Error ကင်းတဲ့ Mac Trackpad တွေ ပိုစိတ်ချရတယ်လို့ ပြောလို့ရတာပါ။
Windows ကို Mac မှာ တင်သုံးနိုင်သေးတယ်
ဒါကတော့ macOS အားသာချက်တခုပါ။ သူ့ Original OS အပြင် သပ်သပ် Bootcamp တင်ပြီး အဲ့ထဲမှာ Windows OS Run ထားလို့ ရတာက Windows ကွန်ပျူတာ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အားသာချက်တခုပါ။
Windows 10 running on MacBook Air
ဘာလို့ MacBook တှကေ Windows ထကျ စြေးကွီးပွီး ပိုကောငျးနရေတာလဲ?
ကှနျပြူတာ တဈလုံးကို အရညျသှေးကောငျး၊ ဘာအပွဈမှ ပွောစရာမရှိတဲ့ အမြိုးစားကို ညှနျပွပါဆိုရငျ Apple MacBook တှလေို့ပဲ ပွောရမှာပါ။ Windows ကှနျပြူတာ ဘယျလောကျပဲ စှမျးဆောငျရညျ ကောငျးနပေါစေ၊ Apple ကို ယှဉျနိုငျနပွေီ ပွောပါစေ၊ ဘာလို့ MacBook ကိုမှ ဈေးကွီးပေးဝယျနပွေီး Apple စံခြိနျ ဘာလို့ Windows မခြိုးနိုငျသေးလဲဆိုတာ တငျပွသှားပါ့မယျ။
Mac ဝယျရ ပိုလှယျတယျ
အရငျကတညျးက MacBook မျောဒယျကို Air နဲ့ Pro ဆိုပွီး နှဈမြိုးပဲထုတျခဲ့တာဆိုတော့ ရှေးခယျြစရာ ထှထှေထေူးထူး မရှိဘူး။ သုံးခငျြတဲ့အနထေားအလိုကျ Air နဲ့ Pro ဆိုပွီး ဝယျနိုငျသလို အှနျလိုငျးစတိုးမှာ ဖွဈဖွဈ၊ ကှနျပြူတာ အရောငျးဆိုငျမှာဖွဈဖွဈ မှိုလိုပေါကျနတေဲ့ Windows Laptop တှထေကျစာရငျ စဉျးစားရ ခေါငျးမခွောကျပါဘူး။ အခုဆိုရငျ New MacBook ဆိုပွီး Apple ထပျမိတျဆကျထားသေးလို့ ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံးအတှကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပိုစမတျကကြ သုံးခငျြသေးတယျဆိုရငျ Air အစား New MacBook ကို ရှေးနိုငျပါသေးတယျ။
Mac တှကေ ပွငျရပိုလှယျတယျ
ဘယျလိုကှနျပြူတာပဲ ဝယျထားဝယျထား နောကျဆုံးပကျြသှားခဲ့ရငျ နီးစပျရာ Service Center ဆီ အမွနျဆုံးသှားပွရစမွဲပါ။ ဒီနရောမှာ Service ဆိုငျက ဘယျ Brand ကိုငျထားတာမလို့၊ ဒီမှာ တခွားလကျတော့ပွငျရငျတော့ ပိုကျဆံပိုကုနျမယျ စသဖွငျ့ Windows ကှနျပြူတာပွငျတဲ့အခါ အခုလို ပွဿနာတှေ မလှဲမသှကွေုံရတာပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး နာမညျရထားတဲ့ Service ဆိုငျတဆိုငျ ဒါမှမဟုတျ ဝယျထားတဲ့ Brand အလိုကျ ဆိုငျရှေးပွငျရတာ အတျော ကသိကအောကျနိုငျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ Mac ပကျြသှားလို့ Sevice ပွရပွီဆိုရငျတော့ ပွောရဆိုရ ပိုလှယျကူသလို အတှငျး အစိတျပိုငျးတှေ လှယျလှယျကူကူ အစားထိုး ပွငျပေးလို့ရတာကွောငျ့ ဝယျထားပွီးရငျလညျး နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာအတှကျ စိုးရိမျစရာမရှိပါဘူး။
Windows ထကျသုံးရ ပိုရိုးရှငျးတယျ
macOS ကို လှမျးကွညျ့လိုကျပါ၊ ပါလာတဲ့ Dock System လေးက သုံးနကွေ Apps တှေ ထညျ့ထားနိုငျသလို အလှယျတကူ ဖှငျ့လို့ရတဲ့ ရိုးရှငျးမှုက Windows ကှနျပြူတာမှာ ပါလာလမေ့ရှိပါဘူး။ နောကျဆုံးထှကျ Windows 10 မှာတောငျ ပိုရိုးရှငျးတဲ့ User Interface (UI) နဲ့ Experience ပါလာတယျဆိုမယျ့ အရငျက Apple OS X ကို မမှီသေးပါဘူး။
Apple Ecosystem က Product အားလုံး တဈမြိုးထဲ ဖွဈစတေယျ
Apple Ecosystem ကိုတော့ ဘယျသူမှ ယှဉျမရသေးဘူး ထငျပါတယျ။ အနီးစပျဆုံး Samsung Products နဲ့ပဲ ယှဉျကွညျ့လိုကျပါ။ Galaxy ဖုနျးတှေ၊ လကျတော့တှနေဲ့ Smart Watch တှကေ အသှငျပွငျခငျြးလညျးမတူ၊ သုံးထားတဲ့ OS ကလညျး တခွားစီဖွဈနတောက Product အားလုံး တဈစုတစညျးထဲ လို့မွငျနရေမယျ့ Apple Ecosystem ကို ယှဉျမရတာပါ။ ဒါကွောငျ့မလို့ MacBook ဝယျထားလိုကျရငျ ပထမဆုံးအခကျြ ပွညျ့စုံသှားပွီဖွဈသလို iPhone ၊ AirPod ၊ iPad နဲ့ Apple Watch တှပေါလာခဲ့ရငျ Perfect ဖွဈသှားပါပွီ။
Built-in Software တှကေ Windows မှာထကျ ပိုသာတယျ
Windows OS မှာ ပါလာတဲ့ Built-in Apps တှကေ သုံးလို့ အစဉျပွတေယျဆိုမယျ့ ပိုကျဆံပေးဝယျရတဲ့ Software တှလေောကျ မစှမျးဆောငျနိုငျကွပါဘူး။ Microsoft ကလညျး ဒီအခကျြကို ပွငျဆငျနတေယျဆိုမယျ့ Mac ထညျ့ပေးထားတဲ့ iMovie ၊ Garage Band နဲ့ Image Capture လို Built-in Music နဲ့ Video Editing Software တှကေို မမီသေးတာ အမှနျပါ။
Windows မှာလို Bloatware Apps တှေ မပါလာဘူး
Bloatware Apps ဆိုတာ တခွား Developer Support ပေးထားတဲ့ Free Apps လို့ပွောခငျြတာပါ။ Windows တငျလိုကျလို့ Download ဆှဲနိုငျပါတယျ၊ Free ရနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ Bloatware တှေ အမြားသောအားဖွငျ့ Windows PC မှာ အနညျးနဲ့ အမြား ပါလာတတျပါတယျ။ Mac မှာတော့ ဘယျလိုပဲ Fresh Windows တငျတငျ၊ အသဈပဲ ဝယျလာဝယျလာ ဘာ Free App မှ ပါမလာသလို တကယျ လိုအပျလာခဲ့ရငျလညျး Apple Store ထဲမှာ သှားရှာလို့ရပါတယျ။
OS သပျသပျ ဝယျသုံးစရာ မလိုဘူး
Windows ပဲဖွဈဖွဈ၊ Mac ပဲဖွဈဖွဈ Update ခပြေးဖို့ အရေးကွီးတာဆိုတော့ Apple ထုတျသမြှ OS Update တှေ အမွဲ Free ရနိုငျပါတယျ။ Windows လညျး Free မပေးဘူးလားဆိုတော့ ပေးပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ First Time ကိုတော့ သုံးခငျြတဲ့ Windows Edition အလိုကျ အနညျးဆုံး ဒျေါလာ ၁၀၀ ပေးဝယျရမှာပါ။ Mac မှာတော့ OS ကို ပိုကျဆံပေးဝယျနစေရာမလိုပါဘူး။
အကောငျးဆုံး ရုပျထှကျ MacBook မှာပဲ ရနိုငျတယျ
အကောငျးဆုံး ရုပျထှကျပိုငျဆိုငျနတေဲ့ Windows လကျတော့တှေ ရှိပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ Mac မှာသုံးနတေဲ့ Retina Display ကိုတော့ ဘယျသူမှ မယှဉျနိုငျသေးပါဘူး။ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရငျ Red ၊ Green ၊ Blue ဆိုတဲ့ RGB Pixel Grid တစုထဲက တဈရောငျခငျြးစီ အကဉျြး၊ အခြဲ့ပွုလုပျနိုငျတဲ့ Retina နညျးပညာကို လိုကျမမီသေးလို့ပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး MacBook တှေ အရောငျထှကျတိကလြှနျးသလို Windows ကှနျပြူတာ ဘယျလောကျပဲ Colour Accuracy မှနျတယျပွောပွော၊ Strong ဖွဈတယျပွောပွော Retina Display ကို ယှဉျမရသေးပါဘူး။
အကောငျးဆုံး Trackpad ကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတယျ
Mac Trackpad က သုံးရအစဉျပွတေယျ၊3Fingers ၊4Fingers စသဖွငျ့ Multi-gesture ကောငျးကောငျး Support လုပျထားတယျ၊ Sensitivity လညျး အရမျးကောငျးတယျ။ ဒီအခကျြတှေ Windows Laptop တခြို့မှာ တှနေို့ငျတယျဆိုမယျ့ Mac လောကျ မကောငျးသေးပါဘူး။ တဈခါတရံ သုံးရတာ အစဉျမပွတောမြိုး၊ မတိကတြာမြိုး Windows Trackpad မှာ ဖွဈတတျသေးတာမလို့ Error ကငျးတဲ့ Mac Trackpad တှေ ပိုစိတျခရြတယျလို့ ပွောလို့ရတာပါ။
Windows ကို Mac မှာ တငျသုံးနိုငျသေးတယျ
ဒါကတော့ macOS အားသာခကျြတခုပါ။ သူ့ Original OS အပွငျ သပျသပျ Bootcamp တငျပွီး အဲ့ထဲမှာ Windows OS Run ထားလို့ ရတာက Windows ကှနျပြူတာ မစှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ အားသာခကျြတခုပါ။
by Zawyè . 12 mins ago